Google inoti AI yayo inokurumidza muchip design | Kubva kuLinux
Google inoti AI yayo inokurumidza muchip dhizaini
Darkcrizt | 11/06/2021 12:03 | Yakagadziridzwa ku 11/06/2021 21:36 | Noticias
Google inoti yakagadzira software ye njere dzakagadzirwa dzinokwanisa kugadzira macomputer machipisi nekukurumidza kupfuura vanhu Mune chinyorwa chakaburitswa mazuva mashoma apfuura, Google inoti chip chinogona kutora vanhu mwedzi kuti vagadzire chinogona kufungidzirwa neAI yayo nyowani mumaawa asingasviki matanhatu.
Artificial njere yatove kushandiswa kugadzira yazvino iteration yemachipisi Tensioner Kugadzira Chikamu (TPU) neGoogle, ayo anoshandiswa kuita mabasa ehunyanzvi ane chekuita nehungwaru, akadaro Google. Mainjiniya eGoogle vakati kufambira mberi kunogona kuve ne "zvakakosha" kune iyo semiconductor indasitiri.
Chaizvoizvo, ndezvekufunga kuti panowanikwa zvinhu zvakaita seCPU uye GPU cores uye ndangariro zvinoiswa zvichipesana pachip. Nzvimbo yavo pamabhodhi madiki aya akakosha nekuti inokanganisa mashandisirwo emagetsi uye kumhanyisa kumhanyisa chip; iyo wiring uye chiratidzo chekufambisa chinodiwa kuti ubatanidze zvese zvakakosha zvikuru.
Mainjiniya eGoogle Azalia Mirhoseini naAnna Goldie, pamwe nevamwe vavo, vanotsanangura mubhuku ravo kudzika kwekudzidzira nzira inokwanisa kugadzira "mapatani ekutanga" mumaawa asingasviki matanhatu, asi dzimwe nguva zvinotora mwedzi.
Mune mamwe mazwi, Google irikushandisa njere dzekunyepedzera kugadzira machipisi ayo anogona kushandiswa kugadzira mamwe masisitimu enjere ekuumbiridza
Sisitimu dzakafanana dzinogona zvakare kurova vanhu mumitambo yakaoma senge go uye chess. Mune zviitiko izvi, maalgorithms akadzidziswa kufambisa zvidimbu zvinowedzera mikana yako yekukunda mutambo, asi mumamiriro ezvinhu ematairi, iyo AI inodzidziswa kuwana mubatanidzwa wakanakisa wezvinhu kuti unyatsoita sezvinobvira mumutambo.
Iyo neural network inoshandisawo mamwe maitiro izvo zvakambotariswa neiyo semiconductor indasitiri, asi yakasiiwa semagumo akafa. Zvinoenderana nechinyorwa ichi, iyo yekuchenjera yekuchengetera yakagamuchira zviuru gumi zvemapurani echips kuti "dzidze" zvinoshanda nezvisingashande.
"Maitiro edu akashandiswa kugadzira chizvarwa chinotevera cheGoogle maAI anowedzera uye ane mukana wekuponesa zviuru zvemaawa ekuedza kwevanhu kuchizvarwa chimwe nechimwe chitsva," mainjiniya vakanyora. "Pakupedzisira, tinotenda kuti yakasimba kwazvo AI-yakagadzirirwa Hardware ichafambisa mberi kweAI, ichigadzira hukama hwekufananidza pakati peminda miviri iyi."
Zvinoenderana nechinyorwa, kana uchigadzira microprocessor kana yekuwedzera basa, zvinowanzo fanirwa kutsanangura mashandiro ayo masisitimu anoshanda mumutauro wepamusoro, senge VHDL, SystemVerilog, kana pamwe Chisel.
Iyi kodhi inozopedzisira yadudzira mune inonzi netlist, iyo inotsanangura maseti macroblocks nemasero akajairwa anofanirwa kubatanidzwa newaya kuita mabasa echip.
Maseru akajairwa ane zvinhu zvekutanga senge NAND uye NOR magedhi emagetsinepo macroblocks aine seti yemasero akajairwa kana zvimwe zvinhu zvemagetsi zvakagadzirirwa kuita basa rakakosha, senge kupa on-chip memory kana processor processor. Naizvozvo, macroblocks akakura zvakanyanya kupfuura akajairwa maseru.
Ipapo iwe unofanirwa kusarudza maitiro ekuronga urwu runyorwa rwemaseru uye macroblocks pane chip. Sekureva kwevashandi veGoogle, zvinogona kutora mainjiniya emunhu vhiki kana kunyange mwedzi kuti vashande pamwe neakasarudzika chip dhizaini maturusi uye iterate nguva zhinji kuti uwane zano rakagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa zvekushandisa simba, nguva, kumhanya, nezvimwe.
Izvo zvinowanzoitika mune ino maitiro ndeyekuti nzvimbo yemakuru macroblocks anofanirwa kuchinjwa panogadzirwa dhizaini. Uyezve unofanirwa kurega zvishandiso zvoga, izvo zvinoshandisa zvisina kujairika algorithms, kudonhedza muhuwandu hwemasero madiki maseru, uye wozochenesa nekudzokorora kusvikira wapedza, iro dheti rinoti.
Kuti ikurumidze nhanho yechip schematic dhizaini, Google yekunyepedzera hunyanzvi nyanzvi dzakagadzira convolutional neural network system iyo inoita macro-block placement pachayo mumaawa mashoma kuti ikwanise kugadzirwa kwakanaka.
Maseru akajairwa anoiswa otomatiki munzvimbo dzisina chinhu neimwe software, maererano nechinyorwa. Iyi muchina yekudzidza system inofanira kukwanisa kuburitsa dhayagiramu yakanaka nekukurumidza uye zvirinani kupfuura nzira yemainjiniya evanhu vachishandisa echinyakare zvombo zvishandiso muindastiri, vashandi veGoogle vakatsanangura muchinyorwa chavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Google inoti AI yayo inokurumidza muchip dhizaini
Linus Torvalds yakaputika zvakare pamazita ekutumira tsamba, panguva ino yaive nemushonga wekudzivirira
Nvidia naValve vanounza DLSS, tekinoroji inobvumidza vatambi kuti vawane kuita kwakawanda paLinux